ISITHA somuntu uyena uqobo lwakhe – Langalibalele Dube. Inkinga enkulu yom-Afrika isekungazini ukuthi ungubani futhi umeleni. Ulimi luyingxenye yosikompilo. Ngicabanga ukuthi isona sizathu esenze uPep Guadiola afunde ulimi lwamaJalimane ngaphambi kokuthatha izintambo kwiBayern Munich.
Ulimi luyithuluzi lokuxhumana futhi lucebile kumlando wamasiko esizwe.
Kuleli lakithi sinenkinga “yezifundiswa”, “nabaholi” abakholwa ukuthi ukuteveza izilimi sasentshonalanga kuhambisana nolwazi nobuhlakani. Kunenkolelo yokuthi izixazululo zezinkinga zaseNingizimu Afrika zingatholakala emazweni nakuzazi zaseNtshonalanga. Luncane kakhulu ucwaningo olwenziwe ngomlando, isiko kanye nezinto ezingamandla abadlali bengabadi.
Kuliqiniso ukuthi noma ungazikhuluma uzikhiphe ngamakhala izilimi zamaqadasi kepha awunakubushintsha ubuwena. Kuyadabukisa ukuzwa abaqeqeshi bethu bezishaya izifuba ngokuphumelela izifundo zebhola zakwamanye amazwe. Nohlelo lokuqeqesha lweSafa luyingxubevange yamaJalimane, amaDashi futhi ubuye uthole namaBrazili khona lapho. Isijingi esingenagama.
Ngicabanga ukuthi kumele sifunde emazweni afana noJapani, Spain namanye amaningi. Lokhu kuzoqala ngokwazisa izilimi namasiko kanye nomlando wesizwe sethu. Ngicabanga ukuthi izindlela esizikopele kwamanye amazwe zehlulekile ukuletha imikhiqizo emihle. Amasu asetshenzisiwe ngaphambili akhiqize izigayigayi ezifana noSugar Xulu, Bhiza Dlamini nabanye abaningi.
Akulona iqiniso ukuthi labo abakhuluma izilimi zaseNtshonalanga bayizazi ezinkulu futhi bangaletha izixazululo emfundweni nasekuthuthukiseni umdlalo webhola. Unzima lo mthwalo!